Shiinaha warshad maaskaro ilaalin caafimaad iyo alaab-qeybiye | Zhongxing
Maaskarada caafimaadka waxaa lagu bixiyaa qaab aseptic ah oo leh iska caabin yar oo hawo ah, carqalad dhiig ah oo isku dhafan, xoog gaar ah, waxtarka sifeynta, u adkeysiga qoyaanka dusha iyo ololka. Caabbinta socodka hawada waa wax ka yar 110 Pa, waxtarka sifeynta ee walxaha aan saliida lahayn ayaa ka weyn 95, waxtarka sifaynta bakteeriyada ayaa ka weyn 95.
Badeecadani waxay ku habboon tahay is-nuugid iyo sifeynta maadada walxaha ku jirta hawada, xannibaadda dhibcaha, dhiigga, dareeraha jidhka, dheecaanka, iwm.
Maaskaro qalliin caafimaad 50 xirmo
Maaskarada kahortaga caafimaadka waxaa badanaa loo isticmaalaa xarumaha caafimaadka, shaybaarrada, ambalaaska, guryaha, goobaha dadweynaha iyo meelaha kale ee dadku xirtaan. Waxay dabooli karaan afka, sanka iyo daanka dadka isticmaala. Si looga hortago noolaha noocan ah ee cudurada keena, dheecaanka jirka, dhibco, walxo, iwm. Ku faafida shaqaalaha. Hababka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo waa:
Sida loo isticmaalo N95xx waji xirmooyinka taxanaha:
1. Fur baakada oo banaanka u soo saar maaskaro, sanka oo banaanka loo soo saaro, labada gacmood hal dheg suun ku xir, hubi in sanka oo kor u socdaa, sida ku cad Jaantuska 1aad ee hoose;
2. Xiro maaskaro, garkaaga geli maaskaarka dhexdiisa, oo labada gacmood dhegta suumanka dhegaha gadaashiisa, sida ku cad Jaantuska 2aad ee hoose;
3. La jaan qaado boos raaxo leh si uu maaskaro ugu haboonaado wejiga, sida ku cad Jaantuska 3 ee hoose
4. Riix farta iyo faraha dhexe ee labada gacmood si aad u hagaajiso sanka ilaa uu uga dhow yahay buundada sanka, sida ku cad Jaantuska 4 ee hoose
5.Waqti kasta oo aad xirto maaskaro oo aad gasho aagga shaqada, waa inaad sameysaa hubin ciriiri ah. Habka baaritaanka ayaa ah in gebi ahaanba lagu daboolo maaskaro-gacmeedka gacmahaaga oo si dhakhso leh loogu neefsado, sida ku cad Jaantuska 5 ee hoose. Hadday daadasho hawo u dhow dahay sanka, raac tillaabooyinka 4) Dib u hagaaji qalliinka sanka illaa uusan ka socon baxsiga hawadu.
Isticmaalka habka N9501 maaskaro taxane maaskaro ah:
1. Fur baakada oo banaanka u soo saar maaskaro, ku dheji dhinaca maaskaro sanka gooskiisa, ka dhig sanka sanka kor, madaxana si dabiici ah ayuu u laalaadaa, sida ku cad Jaantuska 1aad ee hoose;
2. Xidho maaskaro, garka gasho gudaha maaskaro si ay ugu dhowdahay wejiga, isticmaal hal gacan si aad uga gudubto labada madax, ka dibna u isticmaal gacanta kale si aad marka hore madaxa ugu soo jiiddid gadaasha dambe ee madaxa una dhig qoorta, Sida ku cad Jaantuska 2 ee hoose;
3. U soo jiido madaxa kore madaxa gadaashiisa oo saar dusha dhagaha dhagta madaxa, sida ku cad Jaantuska 3 ee hoose;
4. Riix farta iyo farta dhexe ee labada gacmood si aad u hagaajisid carada sanka illaa ay uga dhowdahay buundada sanka, sida ku cad sawirka 4aad ee hoose;
5.Waqti kasta oo aad xirto maaskaro oo aad gasho aagga shaqada, waa inaad sameysaa hubin ciriiri ah. Habka baaritaanka ayaa ah in gebi ahaanba lagu daboolo maaskarada difaaca gacmahaaga oo aad si dhakhso leh u soo baxdid, sida ku cad Jaantuska 5 ee kor ku xusan. Hadday daadasho hawo u dhow dahay sanka, raac tallaabooyinka 4) Dib-u-hagaaji qaybta sanka. Haddii hawadu daadato hareeraheeda, hagaaji madaxa oo ku celi talaabooyinka 1) ilaa 4) illaa aysan ka daadan.
Magaca Qalabka Caafimaadka Maaskaro Difaaca Caafimaadka ah
Model P N9501 suunka dhegaha / N9501 suunka madaxa
Sooc 180mm×120mm / 160mm×105mm / 140mm×95mm
Waxtarka sifeynta bakteeriyada 95%
Waxtarka sifeynta ee walxaha aan saliida ahayn 95%
Lambarka u hoggaansamida Lambarka u hoggaansamida
Codsiga Waxaa loo adeegsaday in lagu shaandheeyo jeermiska cudurada keena hawada, si loo xakameeyo dhibcaha, dhiigga, dheecaanka jirka, dheecaanka iyo sifeynta is-nuugista kale
Diiwaangelinta Maya Xusuusin Su Ordnance 2020214XXXX
Hore: Maaskaro qalliin caafimaad
Xiga: Maaskarada caafimaadka ee aan tolmo wanaagsan lahayn oo la tuuro
Maaskaro Maaskaro Waji Caafimaad ah, Maaskaro ka hortagga fayraska, Maaskarada Neefsashada, Suufka Caafimaadka, Suunka Kalkaalinta, Suufka jeermiska looga dilaaco,